Ilay mpiasan'ny finday | Martech Zone
Talata, Aogositra 2, 2011 Talata, Septambra 4, 2012 Douglas Karr
Tamin'ny taona 2012, naminavina i Morgan Stanley fa ny fandefasana finday avo lenta dia mihoatra ny fandefasana solosaina. Ho fanampin'izay, antenaina fa ny 25% amin'ny e-varotra an-tserasera rehetra dia hohamarinina amin'ny alàlan'ny finday. Tombanana sahady fa ny 30% amin'ny mailaka orinasa dia vakiana amin'ny finday. Na dia ny media sosialy aza no toa mitarika ny ankamaroan'ny tantara… finday tokony ambony saina amin'ny orinasa rehetra.
Saingy ny orinasa dia tsy tokony hijery finday fotsiny amin'ny fomba fijery marketing, ny orinasa dia tokony hamporisika ny mpiasan'izy ireo handray. izany sary avy amin'i Dell miresaka ny fahombiazan'ny finday amin'ny fomba fiasa momba ny asa sy ny famokarana. Araka ny lazain'ny infographic:
Fotoana ve izao handinihana indray ireo politikanao momba ny informatika sy hiditra amin'ny hetsiky ny mpiasa finday? Ireo orinasa izay afaka miovaova haingana amin'ny tontolon'ny finday vaovao dia azo inoana fa hiroborobo sy handroso.
Ireo mpiasa mifototra amin'ny fahalalana dia mitondra fiara amin'ny alàlan'ny fifandraisana hatrany. Mifandray ve ireo mpiasanao?
Tags: Sary torohayFivarotana finday sy tablettefinday infographicmpiasan'ny finday